China Runjin © Krunt ™ -EX800 Extrusion na Slicing Line maka Ice Ude rụpụta na Factory | Runchen
Runjin © Krunt ™ -EX800 Extrusion na Slicing Line maka Ice Ude
Runchen © Expro ™ -EX800 a na-eji ya eme ụdị ice cream na ụdị ice cream juputara, ma ọ na-ejikwa ngwaahịa ice cream chọọ ma sie ike. A na-emepụta ụdị ihe dị iche iche nke ice cream na ngwaọrụ ndị inyeaka.
Productdị ngwaahịa nke enwere ike ịmepụta:
- Mkpanaka mkpanaka - ngwaahịa warara - ice cream cone / cup - slice - block - sandwich - little cake
Standardkpụrụ Runchen © Expro ™ -EX800 akara ude nke ice cream nwere nke usoro nnyefe ihe eji eme ya na ebe a na-echekwa ngwa ngwa. Ntinye / ntaneti nke ngwaahịa a ka edobere n'ihu ebe a na - echekwa ngwa ngwa ma jikọọ ya na ikpo okwu ọrụ, na --eme usoro nnyefe okirikiri. Ejiri ọkọlọtọ ọdụ ọkọlọtọ n'elu ikpo okwu rụọ ọrụ iji kpochapụ ice cream. N'ime ntabi oyi nchekwa, nnyefe nnyefe na-agbagọ na usoro abụọ nke okpokoro igwe anaghị agba nchara.
Dị ka usoro ọrụ izizi, usoro mmepụta wepụtara ngwa nke ice creams na trays ngwaahịa (dị ka ngwaahịa ejiri mkpara, ngwaahịa mpekere ma ọ bụ obere achicha), ma ọ bụ mejupụta akụrụngwa nke ice creams n'ime kesara ndị ahụ . A na-eji nkeji dị iche iche arụ ọrụ maka ngwaahịa dị iche iche dị ka ngwaọrụ nkwụnye mkpanaka, nkesa na-ekesa bisikiiti, ihe nkesa na-ekesa chewing, ihe yiri cone na-acha bọl, elu ice cream, caramel, ihe ọ juiceụ juiceụ, jam ma ọ bụ mkpụrụ osisi a mịrị amị. Mgbe ahụ, trays ndị nwere ngwaahịa gafere ọwara mmiri na-ekpo ọkụ ozugbo ma kpụkọọ site na ikuku ikuku na-ekesa. Mgbe ihe nracha mkpụrụ osisi ahụ kpụkọrọ akpụkọ, aka ọrụ ga-ewepu ngwaahịa ndị ahụ na trays ma banye na chocolate wee bute ngwaahịa a.
Ugboro igwe na usoro isi ike nke ngwaọrụ niile na arụ ọrụ ya bụ ọwara dikwa na ntabi anya. Wheelsgbọ ndị na-akwọ ụgbọala nke usoro nnyefe nke ígwè na isi ihe na-agba ọsọ n'okpuru ikpo okwu ọrụ na-ejikọ aka na isi ikike.
A na-etinye okpokolo agba ọdụ n'elu ikpo okwu iji kwadebe akụkụ ọrụ dị iche iche iji mepụta ngwaahịa pụrụ iche. A na-emebe okpokolo agba a iji gbanwere ibe ya iji mepụta ụdị extrusion ma ọ bụ ụdị ndochi. A na-eji nchara ma ọ bụ ihe ndị na-enweghị ihe mgbochi mee ihe niile dị n'èzí na ihe dị n'elu ikpo okwu.
Ọfụfụ oyi na-eme ozugbo
Ọsọ ahụ na-agbaze ọwara nke Runchen © Expro ™ -EX800 mejuputara uzo abuo nke ihe eji edozi onwe ha. A na-etinye onye na-ekpo ọkụ ọkụ na onye na-agba ọsọ ọsọ dị n'akụkụ usoro nnyefe sarkar. N'ime ntabi oyi na-echekwa ngwa ngwa, nnyefe nnyefe na-agbagọ n'elu igwe anaghị agba nchara n'akụkụ okporo ụzọ ụgbọ mmiri abụọ. A na-ahazi ihe niile na-akwado ya, ihe nkedo ya na okpokoro ya ka ọ dị mfe ihicha ma debe ya. N'etiti ihe nkedo na ihe nkpuchi bu uzo nke mmezi. Usoro ndọtị nke eji edozi usoro nnyefe nke ọma na-eleba anya na mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ na ọwara mmiri ozugbo. Ebe nchekwa nke ọwara ozugbo na-eme ka igwe anaghị agba nchara na PU n'ime. A na-enye ogwe nchekwa nchekwa n'okpuru mmiri.
Ọrụ niile na-enweghị usoro gụnyere ike, na-ejuputa ọrụ na ịchọ mma elu
arụ ọrụ nke ice cream na-ejikwa PLC na njikwa nchịkwa etiti. Enwere ike ịchịkọta data mmepụta niile, jikwaa ma gbanwee tupu oge ahụ na ngalaba nchịkwa. Mgbe ejikọrọ akụrụngwa ndị ọzọ na kọmpụta nnabata, enwere ike ịchịkwa ngwa ọrụ ahụ na mmemme dị iche iche.
Ọkọlọtọ Runchen © Expro ™ -EX800 na-emetụta amonia jụrụ evaporator. Dị ka nhọrọ nhọrọ, usoro a nwekwara ike itinye Freon evaporator.
Runchen © Expro ™ -EX800 Ezubere ngwa ngwa eji arụ ọrụ maka izipụ ngwaahịa ndị a gbanyere na mkpanaka. Enwere ike iji ya tinye ngwaahịa ndị ejiri mkpara rụchaa mgbe gbasiri ike na chocolate. A na-eji aka aka ya arụ ọrụ aka ya na 185 ya na mmiri na -emegharị na chocolate na mgbapụta pụrụ iche.
Productdị ngwaahịa Bisikiitinkesa VetikalỌpụpụ Mkpanakaịkwụnye Kwụịcha Gọmnkesa
Mkpanaka-pluggedngwaahịa √ √ √ √
Sanwichingwaahịa √ √ √
Mberingwaahịa √ √
Productdị ngwaahịa Conenkesa Chocolatespraying Ogendochi Pen ndochi N'eluochicho mma
Iko okirikiri √ √ √
Obere achicha √ √
Ike (unit kwa awa)
Mkpanaka-plugged ice ude:
Ice ude iko:
Sanwichi ice cream:
Achịcha ice cream: enweghị mkpuchi
Gbochie ice cream
Ikike ahụ dabere na ngwaahịa ọkọlọtọ ice cream na usoro ndị a na okpomọkụ evaporating nke -45 ℃.
Mmanu mmanu nonfat ntụ ntụmmiri ara Okpeteshuga) Glucose plasm Ihe enyemaka Ọdịnaya nke condensate Mmiri Na ngụkọta
10.0% 11% 12.0% Ọzọ 0,5% 39.0% 61.0% 100.0%
Ike nke ngwaahịa iberibe sitere na ngwaahịa ọkọlọtọ nwere oke ọkpụrụkpụ nke 25 mm.
Ike nke cones a kpụkọrọ na-adabere na ngwaahịa ndị nwere ọkọlọtọ nke kachasị dị 60 mm.
Ọrụ n'elu ikpo okwu Nchekwa nke
Nchekwa nke jụrụ
Net n'arọ n'arọ 2,000 7,200 4,200
Gross arọ n'arọ 3,000 9,500 6,600
Oke kachasị m 5.41 × 1.35 × 2.7 9.1 × 2.42 × 2.9 7.71 × 2.42 × 2.9
Nke gara aga: Runjin © Krunt ™ -N2000 Ice Cream Igwe Igwe
Osote: Runjin © Krunt ™ -RM35 Igwe Friiz